အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း | Great Hor Kham
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်မြို့
နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ပထမအကြိမ်အဓိကသက်ဆိုင်သူ/ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား
ဦးကိန်မိုင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်	ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ဦးကျော်ကျော်ထွန်း ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
ဦးကိုကိုဇော် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
ဒေါ်နန်းလွင်လွင်စိန် ခရိုင်ဦးစီးမှူး၊ ခရိုင်စိုင်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ဒေါက်တာကောင်းမြတ်ဟိန်း ခရိုင်ဦးစီးမှူး၊ ခရိုင်မွေး/ ကုဦးစီးဌာန
ဦးသိန်းအောင် ခရိုင်အင်ဂျင်နီယာ၊ ခရိုင်လျှပ်စစ်
ဦးဇော်မိုးအေး လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ခရိုင်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန
ဦးသိန်းဝင်း အင်ဂျင်နီယာ ၂၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာ
ဦးဆန်းလင်းအောင် ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ စက်မှုသီးနှံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
ဦးမောင်မောင်လှိုင် ဦးစီးအရာရှိ၊ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
ဦးသိန်းဇော် မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာ၊ မြို့နယ်လျှပ်စစ်
ဦးမင်းမင်းအောင် မြို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေး
ဦးအေးလွင် လက်ထောက်ဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ်မြေစာရင်း
ဦးတင့်လွင် တောအုပ်၊ မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာန/li>
ဦးစိုင်းစောဝ့် အတွင်းရေးမှူး၊ မြို့နယ်အထောက်အကူပြုကော်မတီ
ဦးသိန်းဝင်း အဖွဲ့ဝင်၊ မြို့နယ်စည်ပင်ကော်မတီ
ဒေါ်နန်းနွမ်းခမ်း အငယ်တန်းစာရေး (စွမ်စော်)၊ မြို့နယ်ထွေ/ အုပ်
ဦးငွေစိုး စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ၊ နယူးစတားလိုက်ကုမ္ပဏီ
စိုင်းသိန်းကျော် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်
စိုင်းလောဝ်လိုင်း ရပ်ကွက်ထောက်ကူပြု၊ စျေးရပ်ကွက်
စိုင်းသန်းလွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ခရစ်ယာန်ရပ်ကွက်
စိုင်းကျော်သိန်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကောင်းနောင်ရပ်ကွက်
စိုင်းကျော်ဦး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကောင်းမူးတုံရပ်ကွက်
စိုင်းကာခမ်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ စွမ်စော်ရပ်ကွက်
စိုင်းအိုက်ညွှန့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ တော်ရွက်ရပ်ကွက်
စိုင်းမြတ်အောင် အတွင်းရေးမှူး၊ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအသင်း
ဦးသောင်းထွန်း ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဂရုဏာ လူမှုကူညီရေးအသင်း
ဦးအောင်နန္ဒ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ MSDES ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဒေါက်တာကျော်စွာတင့် အတိုင်ပင်ခံ၊ MSDES ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဒေါက်တာသန်းအောင်ထွေး အတိုင်ပင်ခံ၊ MSDES ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဒေါက်တာကျော်မောင်မောင်ဟိန်း လက်ထောက်မန်နေဂျာ၊ MSDES ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဦးသပြေမျိုးဦး Project Coordinator, MSDES ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဦးဆန်းဝင်းထွန်း Project Coordinator, MSDES ကုမ္ပဏီလီမိတက်
စိုင်းအုန်းမြင့် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ GHK Public Co., Ltd
စိုင်းရီမွန် ဒါရိုက်တာ (စီမံ)၊ GHK Public Co., Ltd
စိုင်းတင်အောင် ဒါရိုက်တာ (စီမံကိန်း)၊ GHK Public Co., Ltd
စိုင်းထွန်းမြင့် ဒါရိုက်တာ (စက်မှု)၊ GHK Public Co., Ltd
စိုင်းညီဆာ ဒါရိုက်တာ (ICT)၊ GHK Public Co., Ltd
စိုင်းဆမ်မောဝ် ဒါရိုက်တာ (ဆောက်လုပ်ရေး)၊ GHK Public Co., Ltd
စိုင်းကျော်ညွှန့် ဒါရိုက်တာ၊ GHK Public Co., Ltd နှင့်
ဒေသခံပြည်သူများ ၁၂၁ ဦး
(က)စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လူမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်သူလူထုထံသို့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာချပြရန်။
(ခ)စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဒေသခံပြည်သူလူထု၏အမြင်၊ သဘောထားနှင့် အကြံပြုချက်များ ရယူရန်။
(ဂ)နိုင်ငံတော်အကျိုးပြု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူလူထုမှ ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရန်။
(၁) စိုင်းအုန်းမြင့်၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြမှု
စိုင်းအုန်းမြင့်မှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပြီး၊ အခမ်းအနားပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပဏာမ ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။ ယနေ့ စွမ်စော်ရပ်ကွက် လူငယ်ဇရပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အဓိကသက်ဆိုင်သူများ / ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးတွင် နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ထားမှုကို ချပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လိုအပ်ချက်များ ရှိကောင်းရှိမည်ဖြစ်၍ ဝိုင်းဝန်းဖြည့်စွက် အကြံဉာဏ် ပေးကြရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ယနေ့ လာရောက်ဆွေးနွေးတင်ပြသည့် စီမံကိန်း အကြောင်းအရာနှင့် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အချိန်ကာလမှာ ၁-နှစ်ခွဲခန့် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ် ဆိုသော်လည်း လုပ်ငန်း ပမာဏမှာ မသေးသဖြင့် ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းကို သေချာကောင်းမွန် ခိုင်ခန့်အောင် အဖက်ဖက်မှ ကြည့်ရှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အချိန်ယူပြီး လုပ်ခဲ့ရခြင်းကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများကို တင်ပြရာတွင် ဒီဇိုင်းမပြီးစီးပါက အပြောသက်သက်သာရှိပြီး ရရှိမည့် အကျိုးရလဒ်များကို မပြောပြနိုင်ကြောင်း၊ ယခုအခါ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်း ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ အကြမ်းအားဖြင့် သိရပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလို သိလာရသည့် အချိန်တွင် တတိယ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် မြန်မာစဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှု အင်ဂျင်နီယာ ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ (MSDES) ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်ခြေ စူးစမ်းလေ့လာမှု ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ (MSDES) အဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယနေ့ ဆွေးနွေး တင်ပြမည် ဖြစ်၍ MSDES အဖွဲ့နှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုကြောင်း ပြောပြီး MSDES အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ စိုင်းအုန်းမြင့်မှ မိမိတို့ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုကြောင်း၊ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီသည် မူဆယ်မြို့၊ ကောင်းမူးလွယ်ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိကြောင်း၊ အများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆိုသည်မှာ ယခုအစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်းပြီး အများပိုင်ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်၍ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ကြရန် မိန့်ကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၁၂.၁၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် အများပိုင်ကုမ္ပဏီကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း၊ တည်ထောင်ပြီးပြီးချင်း ဧက-၃၀၀ ခန့်ရှိသော မူဆယ်မြို့၊ ဗဟိုစီးပွားရေးဇုံစီမံကိန်း နယူးစတားလိုက် ကုမ္ပဏီတွင် (Main) ပင်မကန်ထရိုက်တာ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယနေ့အချိန်အထိ အခြေခံ အဆောက်အအုံအဖြစ် လမ်း၊ တံတား၊ မီး၊ ရေ လုပ်ငန်း ၇၅% ခန့် ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း၊ တည်ထောင်ပြီး ၆-လခန့်တွင် မိမိတို့ဒေသ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်အား အသုံးချပြီး ဘာတွေလုပ်လို့ရနိုင်မလဲလို့ စူစမ်းလေ့လာကြည့်သောအခါ ပထမ နမ့်ပေါ်ချောင်း၊ ဒုတိယ နမ့်ခိုင်ချောင်း၊ တတိယ နမ္မတူမြစ် စသည့် သဘာဝသယံဇာတများကို အများပိုင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ပါက ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာ အများကြီးရှိနိုင်ကြောင်း၊ အများပိုင် ကုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ အသက် ၁၈-နှစ်ပြည့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုး မည်သူမဆို ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တစ်ဦးတစ်ယောက် အင်အားဖြင့် လုပ်၍မရသည့် ဒေသတွင်းရှိ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်ကို အသုံးချခြင်းသည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်ကို ရွေးချယ်ရသနည်း ဆိုလျှင် မိမိတို့နိုင်ငံသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် ပမာဏမှာ နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၃၀% ခန့်သာ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် အခြေခံအဆောက်အအုံတွင် ပါဝင်ကြောင်း၊ ဒေသအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ရေး၊ နိုင်ငံတော်အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာ၊ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်ဖြစ်ရေး ဝိုင်းဝန်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ် စူးစမ်းလေ့လာမှု ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီ ဖြစ်၍ မိမိတို့ ပြင်ဆင်ထားသည့် ရေအားလျှပ်စစ် ဒီဇိုင်းအစီအမံများကို တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်ရေး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် များအား အပိုင်း ၁၀-ပိုင်း ခွဲ၍ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းတည်နေရာ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ စူးစမ်းလေ့လာမှု၊ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဆိုင်ရာ စူးစမ်းမှု၊ လမ်းအူကြောင်း ရွေးချယ်ခြင်း၊ သဘာဝနှင့် လူမှုစီးပွား ပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်နိုင်ခြေ စူးစမ်းလေ့လာမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်၊ နှိုင်းယှဉ်ချက်၊ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရေး အစီအစဉ်များကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့် တကွ Projector ဖြင့် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေး တင်ပြပါသည်။
ဆက်လက်ဆွေးနွေးရာတွင် MSDES အဖွဲ့သည် တတိယအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းနှင့် မပတ်သက်ပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ပြည်သူလူထုကြားတွင် ရပ်တည်ပြီး သမာသမတ်ကျကျ လုပ်ဆောင်သွားမည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်မှုကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းအကျဉ်း ရှိမှာဖြစ်ပြီး ဒေသခံ ပြည်သူလူထုများအတွက် စီးပွားရေး လိုအပ်ချက်များကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ MSDES အဖွဲ့၏ သဘာဝနှင့် လူမှုဝန်းကျင်စူးစမ်းမှု၊ သက်ရောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိစေရန် စူးစမ်းလေ့လာမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဒေသခံပြည်သူလူထု ကိုယ်စားလှယ်များ ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသွားပါသည်။
(၂) ဦးအောင်နန္ဒ၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ (MSDES Co., Ltd)မှ ဆွေးနွေးတင်ပြမှု
ဦးအောင်နန္ဒမှ ဦးစွာမိတ်ဆက်စကားပြောကြားပြီး ပထမအကြိမ် အဓိကသက်ဆိုင်သူများ / ကိုယ်စားလှယ် များတွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားကို မအားလပ်သည့်ကြားမှ တက်ရောက်ပေးသည့်အတွက် ပထမဆုံး အနေဖြင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားဆန်းစစ် လေ့လာရေးအဖွဲ့ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ မိမိတို့၏ ရပ်တည်မှု၊ မိမိတို့၏ အမြင်ကို ပြောပြချင်ကြောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အမြင် သဘောထား ဖွံ့ဖြိုးမှုများ လုပ်သည့်အခါ ပစ္စုပ္ပန်အတွက် လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသလို အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအတွက် အနာဂတ်တွင် လိုအပ်မည့် လိုအပ်ချက်များ ပစ္စုပ္ပန်ရော အနာဂတ်ပါ ရှေးရှုပြီး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုနောက်ပိုင်း စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အခါ စီမံကိန်းကို ပြီးစလွယ်လုပ်၍ မရပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝ သယံဇာတကို ဘယ်လို ခြိုးခြံချွေတာစွာနဲ့ ဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင် လုပ်မလဲ၊ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု၊ သဘာဝ သယံဇာတများကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချမှု၊ ဒီအချက်တွေကို ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ဆောင်ရွက်လာကြရကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တစ်ခုတည်းကို ကြည့်၍မရပါ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူမှုစီးပွား ဒီ ၂-ချက်ပဲကြည့်၍မရ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူမှုစီးပွား ပတ်ဝန်းကျင် သယံဇာတ ရှေးရှုပြီး ကြည့်ရကြောင်း၊ ဟန်ချက်ညီညီနှင့် ခြေထောက်သုံးချောင်း ထောက်ထားသကဲ့သို့ တစ်ခုခုပြိုလဲတာနဲ့ ဟန်ချက်ပြိုပြီး၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဓိပ္ပါယ်ဆိုသည်မှာ - စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ လူမှုစီးပွား အကျိုးတရား၊ သဘာဝ သယံဇာတ ဒီ ၃-ချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်စားတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟုခေါ်ကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ရပ်တည်ချက်မှာလည်း ထို့အတူပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ အချုပ်ကို ပြောရလျှင် ကျွန်တော်တို့ (MSDES) သည် အင်ဂျင်နီယာ ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်သည့်အခါ အချက် ၃ ချက်ကို ညီညီမျှမျှ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းဘက်ကို လိုက်၍မရကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ရမည့် မျက်နှာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူမှုစီးပွား၊ ပတ်ဝန်းကျင်သယံဇာတ၊ အချက် ၃-ချက်ကိုပဲ ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ ဒီအခမ်းအနားအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် တင်ပြလိုကြောင်း၊ ဒေသခံရပ်မိ/ ရပ်ဖများနှင့် ဒေသ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ထိုင်နေသည့်စားပွဲပေါ်တွင် အကြံပြု တောင်းခံလွှာ ချထားကြောင်း၊ ဒီအကြံပြု တောင်းခံလွှာမှာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်လျှင် ကောင်းမည်၊ မိမိတို့ သဘောထား စီမံကိန်းအပေါ် အမြင်၊ အကျိုးရှိမယ် / မရှိဘူး ၊ ပြီးရင် ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် ဘာလုပ်စေချင်တယ်၊ မိမိတို့ရဲ့ စိုးရိမ်စိတ် သောက စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုး သိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြံ ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားဖြင့် ရေးပေးပါ။ ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနား၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်သည် ဒေသခံရပ်မိ/ ရပ်ဖများ၏ သဘောထား အမြင်ကို လိုချင်၍ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီလို ရေးသားပေးတဲ့အခါ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်နှင့် အမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ နေရပ်လိပ်စာ ကျေးရွာအမည်များ ထည့်ပေးစေလိုကြောင်းပြောကြား သွားပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်လေ့လာမှု အစီရင်ခံစာကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနသို့ တင်ပြပြီးလျှင် ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အချိန်ကာလအားဖြင့် ၃-လခန့် ကြာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်မှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်အလက်များဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသည့် စာအုပ်ကို ဒေသအာဏာပိုင်ထံတွင် တစ်အုပ်ထားရှိမှာ ဖြစ်၍ အချိန်မရွေးသွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း၊ နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ စီမံကိန်း လေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ အနေဖြင့် စီမံကိန်း၏စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ရှေးရှုရန်၊ ထိခိုက်မှုများကို လျော့ချရန်၊ ရရှိတဲ့ အကျိုးရလဒ်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် လူမှုစီးပွား စီမံခန့်ခွဲမှု ထည့်သွင်းရေးဆွဲရန်၊ ဒေသခံ ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွား၊ အခန်းကဏ္ဍ၊ သဘောထား၊ ဆန္ဒ၊ အကြံပြုချက်များကို အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လေ့လာတဲ့အခါ အထူးပြုဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန် မှာကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် နေရာများတွင် လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်ပြီး ဒေသခံပြည်သူများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍတွင် စီမံကိန်း ပိုင်ရှင်မှ ပံ့ပိုးကူညီ စောင့်ရှောက်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပံ့ပိုးကူညီ စောင့်ရှောက်သည့် နေရာတွင် ‘ လူမှုစီးပွား ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု ’ တို့ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်သူသည် ရရှိလာသည့် အကျိုးအမြတ်ကို အကုန်ယူ၍ မရကြောင်း၊ ဒေသအကျိုးအတွက် ပြန်လည် အသုံးချရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုခေတ် ကာလတွင် နိုင်ငံတကာ၏ အလေ့အကျင့်ကောင်း တစ်ခု ဖြစ်သည့် ( CSR ) ခေါ် လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း တာဝန်ယူမှု အစီအစဉ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားရန် မှာကြားခဲ့ကြောင်း၊ လိုအပ်ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရန် ကူညီပေးရန်တို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အဖွဲ့၏ လေ့လာမှုရလဒ်များကို ဒေသခံပြည်သူများ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြပေးရန်၊ အရှိကို အရှိအတိုင်း ထိန်ဝှက်မထားပဲ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ချပြရန်၊ လူမှုဝန်းကျင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု အစီအစဉ်ကိုလည်း ပြည်သူလူထုအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တင်ပြပေးရန်၊ လေ့လာသူ အဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း ချောင်းအထက်ပိုင်း ရေဝေရေလဲ ဒေသ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အကြံဉာဏ်ပေးရန်၊ ချောင်းရိုးတစ်လျှောက် အထူးပြုဇီဝမျိုးကွဲတွေ အပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှုကို အလေးထား လေ့လာပေးရန်၊ ချောင်းအထက်ပိုင်း၊ ချောင်းအောက်ပိုင်းတွင် ချောင်းရေ အသုံးချမှု ချောင်းအထက်ပိုင်း ရေဝေရေလဲဒေသတွင် သစ်တောကြိုးဝိုင်း ရှိမရှိ လေ့လာဆန်းစစ်ရန်၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်တွေကို စီမံကိန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ မိမိတို့ ရေးသားထားသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအမံအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်ဟု ကတိကဝတ်ကို ရယူရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ဒေသခံ ရပ်မိ ရပ်ဖများမှ မိမိ သဘောထားအမြင်၊ ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ရန်ဆိုသည့် အကြံပြုချက်၊ စိုးရိမ်မှုများကို အကြံပြုလွှာ စာရွက်တွင် ရေးပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုကြောင်း၊ နောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ်တွင် သိလိုသည်များရှိပါက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးရန် ပန်ကြားရင်း နိဂုံးချုပ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသွားပါသည်။
(၃) ဒေါက်တာသန်းအောင်ထွေး (MSDES)မှ ဆွေးနွေးတင်ပြမှု
ဒေါက်တာ သန်းအောင်ထွေးမှ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွား အကျိုးသက်ရောက်မှု ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေး တင်ပြလိုကြောင်း “ESIA ဘာကြောင့် လုပ်သလဲ” နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးရာတွင် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် အကျိုးစီးပွား ရေရှည်တည်တံ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သယံဇာတ နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အားလုံး ဟန်ချက်ညီမျှမှု ရှိရေး၊ စီမံကိန်း၏ ဆိုးကျိုးကို တတ်နိုင်သမျှ ဖယ်ရှား လျော့နည်းစေ၍ ကောင်းကျိုးကို အတတ်နိုင်ဆုံး တိုးပွားစေမည့် အစီအမံများ ရေးဆွဲချမှတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ESIA လုပ်ဆောင်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပဏာမ ဆွေးနွေးပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် ESIA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် (၁) အဆိုပြုစီမံကိန်း၏ သဘာဝပ တ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံ၊ မျိုးကွဲစနစ်များ၊ လူမှုစီးပွားနှင့် ကျန်းမာရေးတို့အပေါ် အကျိုး သက်ရောက်နိုင်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ (၂) မကောင်းသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ လျော့နည်းစေရန်နှင့် ကောင်ကျိုးများ တိုးပွားစေရန် နည်းလမ်းဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုရမည့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ (၃) အဆိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စီမံကိန်းဖော်ဆောင်မည့် ဒေသတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအား အသိပေးခြင်း၊ သဘောထား အကြံဉာဏ်ရယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်ကြောင်း၊ ESIA လုပ်ငန်း အောင်မြင်မှုသည် အဓိကကျကြောင်း၊ (၁) ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ၊ (၂) အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ ဒေသခံပြည်သူများ၊ (၃) တတိယအဖွဲ့အစည်း၊ သုံးဦးသုံးဖလှယ်တက်တက်ကြွကြွရှိမှသာ ESIA လုပ်ငန်းအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ (Developer) ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အဓိက အကျဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ (Developer) သည် အတ္တ/ပရ ရှိရန်လိုကြောင်း၊ ဒေသပတ်ဝန်းကျင်၊ ဒေသလူထု အတတ်နိုင်ဆုံး မထိခိုက်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးချင်စိတ် ရှိရန်လိုကြောင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကြောင့် မလွဲသာ၍ ESIA ဆောင်ရွက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ESIA ၏ လုပ်ငန်း အဆင်ဆင့်တွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ESIA မှ စိစစ်အကြံပြုချက်များ အတိုင်း ဒေသနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးအတွက် လိုအပ်သည်ကို လိုလိုလားလား ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုကြောင်း တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်သိမှုရှိရန် တို့ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိလာသော ဒီမိုကရေစီခေတ် ဖြစ်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများသည် အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်သာမက ပြည်သူ၏ လက်ခံခွင့်ပြုချက် (Social License) လိုအပ်လာကြောင်း၊ အရေးကြီးလာကြောင်း၊ ESIA လုပ်ငန်းတွင် Local Knowledge သည် အရေးကြီးကြောင်း၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများတွင် လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှု (Public Participation) ရှိရန် လိုကြောင်း၊ ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် ပြဿနာများအား အဖြေရှာရာတွင် လူထုကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရာတွင် လူထုပါဝင်မှုသည် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ESIA လုပ်ငန်းစဉ်အရ ယခု တွေ့ဆုံပွဲသည် လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ အကြံဉာဏ်၊ သဘောထား မှတ်ချက် တောင်းခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တတိယအဖွဲ့အစည်း (Third Party) သည် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံမှ ပညာရှင်များ ပါဝင်ရန် လိုအပ်ပြီး သမာသမတ် ရှိရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ESIA ၏ အကျိုးကျေးဇူးမှာ ESIA ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သော စီမံကိန်းသည် အရည်အသွေးရှိသော ရေရည်တည်တံ့သော စီမံကိန်းဖြစ်စေသည့် အကျိုးများ ရှိကြောင်း စသဖြင့် အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေး တင်ပြသွားပါသည်။
(၄) ဒေါက်တာကျော်စွာတင့်၊ ဒုပါမောက္ခ (MSDES)မှ ဆွေးနွေးတင်ပြမှု
ဒေါက်တာ ကျော်စွာတင့်မှ ဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပြီးနောက် ဆွေးနွေးပွဲကို တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး မိမိတို့ ပြောသမျှကို စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် သည်းခံပြီး နားထောင်ပေးသည့် အတွက် ကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း၊ နမ့်ပေါ်ဆည် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ထိခိုက်မှုများကို အကျဉ်းချုပ်ပြီး တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အရင်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ထိခိုက်မှုများကို မတင်ပြမီ ဆည်တစ်ခုရဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းကို ကြွရောက်လာကြတဲ့ လူကြီးမင်းတို့ ပိုမိုသိရှိ နားလည်စေရန် ဆွေးနွေး တင်ပြလိုကြောင်း၊ နမ့်ပေါ်ဆည်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရန် အဓိက ရည်ရွယ်ပြီး ရေအားကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်ဆုံး စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်ချောင်းကို ပိတ်ပြီး ရေကို သိုလှောင်ထားရှိကာ ရေမှတဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူမှု အဆင့်ဆင့်ကို Projector ဖြင့် ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းများနှင့် တကွ ရှင်းလင်း တင်ပြပါသည်။
ရေတားနံရံ ဆောက်လုပ်ထားသည့် အထက်ပိုင်းကို ဆည်အထက်ပိုင်း ခေါ်ပြီး ရေတားနံရံအောက် ရေလွဲ လုပ်ထားသည့် အပိုင်းကို ဆည်အောက်ပိုင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆည်အထက်ပိုင်း ဒေသတွင် ရေမျက်နှာပြင်မြင့် တက်လာခြင်း ဆိုသည့် ရေအနည်းအများပေါ် မူတည်ပြီး ရေရရှိမှု နည်းသွားခြင်း ပိုမို များပြားလာခြင်း ဆိုသည့် အကျိုးအပြစ်များကို ခံစားရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဆည်အောက်ပိုင်းတွင် ဆည်မှ ပြန်ထုတ်လိုက်သည့် ရေအနည်းအများပေါ် မူတည်ပြီး ရေရရှိမှု နည်းသွားခြင်း၊ ပိုမို များပြားလာခြင်း ဆိုသည့် အကျိုးအပြစ်များကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆည်ကျိုးပေါက်၊ ပျက်စီးသွားခဲ့လျှင် ဆည်ရေလွှမ်းခြင်း ဆိုသည့် အကျိုးအပြစ်ကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆည် အထက်ပိုင်းနှင့် ဆည် အောက်ပိုင်းတို့တွင် တွေ့ကြုံရမည့် ထိခိုက်မှုတွေ ရရှိလာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများကို ယနေ့ အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ တင်ပြသည့် အကြောင်းအရာသည် သေသေချာချာ လက်တွေ့များသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာ တွေ့ရှိချက်များ နည်းပါးပြီး စာအုပ်များ၊ ဗဟုသုတများမှ တစ်ဆင့် လေ့လာ တွေ့ရှိမှုများကို အကြမ်းဖျင်း တင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ တင်ပြသည့် အကြောင်းအရာများသည် တကယ်ဖြစ်ပေါ်မည်ဟု ပြော၍ မရကြောင်း၊ ပိုပြီး ဖြစ်ပေါ်နိုင်သကဲ့သို့ လျော့ပြီးလည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းကို ကြိုတင် ပြောကြားထားလိုကြောင်း၊ မိမိတို့ အဖွဲ့အနေဖြင့် ယခုထက် ပိုပြီးတိကျသည့် ရလဒ်များ တွေ့ရှိချက်များ ရရှိအောင် ပိုမို လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တွေ့ရှိထားတဲ့ ထိခိုက်မှုများ လျော့နည်း သက်သာအောင် လုပ်မည့် နည်းလမ်းများကို စောင့်ကြည့် လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ တင်ပြသည့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ထိခိုက်မှုများကို လူကြီးမင်းများမှ ပိုမို သိရှိပြီးနောက် နမ့်ပေါ်ဆည် ဆောက်လုပ်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကို ပိုမိုသိရှိပြီး ပိုမို အကြံပြုလာနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ လူကြီးမင်းတို့ အကြံပြုချက်တွေသည် မိမိတို့ မလေ့လာမသိရှိသော အချက်များလည်း ပါရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိတို့အတွက်လည်း အများကြီး အကျိုးရှိကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ထိခိုက်မှုများကို အကြမ်းဖျင်း တင်ပြလိုပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ဆက်လက်၍ (၁) ဆည်တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့် (၂) လည်ပတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ထိခိုက်မှုဟူ၍ အပိုင်း ၂-ပိုင်း ခွဲ၍ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လမ်းဖောက်ခြင်း၊ နေရာရှင်းလင်းခြင်းနှင့် မြေညှိခြင်း၊ ယာယီတည်ဆောက်ရေး စခန်းများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေကာနံရံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ရေး စက်ယန္တရားများ သွားလာ/ မောင်းနှင်ခြင်း၊ ကျောက်သား ပြုပြင်ရန် လွန်တူးခြင်းနှင့် မိုင်းခွဲခြင်း၊ ဆည် ရေလွမ်းဧရိယာ အတွင်းရှိ သစ်ပင်များ ခုတ်လှဲခြင်း တို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ ရှိနိုင်ကြောင်း၊ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ထိခိုက်မှုအချို့တွင် စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်အနီးလူနေအိမ်များမရှိခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်လက်ရာများပျက်စီးခြင်း၊ မြေဆီလွှာတိုက်စားခြင်း၊ အပင်နှင့် တိရိစ္ဆာန်များအပေါ် ထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် လပေါင်း ၃၀-နီးပါးရှိ၍ (ကာလတို) အတွင်း မိုင်းခွဲခြင်းကြောင့် အသံတုန်ခါမှု၊ ယန္တရားများ မောင်းနှင့်မှုကြောင့် ဖုန်ထခြင်း၊ အမှိုက်သရိုက်များကြောင့် ဆည်အောက်ဘက် ရေအရည်အသွေး ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရေနေ သတ္တဝါများအပေါ် ထိခိုက်မှု၊ မြစ်အတွင်းရှိ ငါးများ မွေးဖွား၊ သွားလာမှုအပေါ် ထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊ ပြင်ပလူစိမ်းများ ဝင်ရောက်မှုတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး မြစ်အောက်ပိုင်းတွင် ချောင်းမှရေကို သောက်ရေ သုံးရေ အသုံးမပြုခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်မှုမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။
ဆည်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူး အချို့တွင် တည်ဆောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု ရရှိနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိနိုင်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်စု ဝင်ငွေ တိုးတက်နိုင်ခြင်း၊ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ခြင်း၊ လူထု အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ကြောင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ရေများ သိုလှောင်ထားရှိခြင်း၊ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ပါဝင်ကြောင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ထိခိုက်မှု အချို့တွင် လည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ နှစ် ၃၀/ ၅၀ ခန့် ကြာနိုင်သဖြင့် (ကာလရှည်) အတွင်း ထိခိုက်မှု အချို့တွင် မြစ်အတွင်းရှိ ငါးများ မွေးဖွား/ သွားလာမှုအပေါ် ထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊ ဆည်အတွင်းရှိ အနယ်အနှစ်များနှင့် အမှိုက်သရိုက်များ (ခြင်ပေါက်ဖွားမှု) ရေနေသတ္တဝါ မျိုးစိတ်သစ်များ ပေါက်ဖွားခြင်း၊ ဆည် တာတမံ ကြံ့ခိုင်မှု၊ လူစိမ်းများ ဝင်ရောက် နေထိုင်မှုများတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများတွင် နမ့်ပေါ်ဆည် တည်ဆောက်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိခြင်းမှာ သေချာကြောင်း၊ ဆည်အောက်ပိုင်းတွင် ရေစီးဆင်းမှုအနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး အကျိုးအပြစ်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ နမ့်ပေါ်ချောင်းအောက်ပိုင်းတွင် လယ်လုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် ရေစီးဆင်းမှုများက အကျိုးရှိသည်ကို သိရကြောင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ၊ ဆက်စပ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ခြင်း၊ အပန်းဖြေ နေရာများ ရှိလာခြင်း၊ အရေးပေါ် လိုအပ်လာပါက ဖြစ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ကူးရန် မြစ်ကူးနေရာများ ရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ နမ့်ပေါ်ဆည်သည် မူဆယ်မြို့၏ အထင်ကရ အထိမ်းအမှတ်တစ်ခု အဖြစ် တည်ရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း အကျယ်တစ်ဝင့် ရှင်းလင်း တင်ပြ ဆွေးနွေးသွားပါသည်။
စီမံကိန်းတိုင်းသည် ကောင်းကျိုး ရှိသလို ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသည် ရှိကိုရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထု၊ ဒေသ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်သည် စီမံကိန်းကို တားဆီးရန် မဟုတ် စီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဆိုးကျိုးကို လျော့ဖို့ တွန်းအားပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ ဆောက်လုပ်မည့် နမ့်ပေါ်ဆည်သည် မိမိ တင်ပြသွားသည့် အချက်များကို ကြည့်ပြီး ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေကို သိရှိပြီး ဆည်တည်ဆောက်မည့် လုပ်ငန်းရှင်သည် ဆိုးကျိုးများကို လျော့ချရဲ့လား၊ ကောင်းကျိုးတွေကို မြှင့်တင်ရဲ့လား ဆိုတာကို ဒေသခံတွေ အနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းအကြံပေး ဝိုင်းဝန်း ထိန်းကျောင်းသွားမည်ဆိုပါက ပြည်သူများ လက်ခံသော၊ သဘောကျ နှစ်ခြိုက်သော၊ ပြည်သူနှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ဆည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု ယုံကြည်ရင်းဖြင့် နိဂုံး ချုပ်လိုပါကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားသွားပါသည်။
(၅) စိုင်းအုန်းမြင့် (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်)မှ ဆွေးနွေးတင်ပြမှု
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ စိုင်းအုန်းမြင့်မှ ဆည်တာတမံ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံနှင့် ပတ်သက်၍ တချို့တဝက်ကို စောစောက တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဒီဇိုင်းအရ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အနေအထား အကျဉ်းအား တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တမံဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံနှင့် ပတ်သက်၍ ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်သည့် ဒီဇိုင်းကို လုံးဝသေချာစွာ ပြုလုပ်ထားကြောင်း ရေပိုလွဲစနစ်ကို နောင်လာမည့် နှစ်-၅ဝဝ ၏ ရေထုထည် ပမာဏကို ဒီဇိုင်းလုပ်ထားကြောင်း၊ ဦးအောင်နန္ဒမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားသည့် သစ်လုံး (မျှောပါ)များ မည်သို့ ဖြေရှင်းမလဲ ဆိုသည့် နည်းစနစ်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ မြစ်ချောင်းအတွင်း ဝင်လာမည့် ရေဖမ်းဧရိယာထဲတွင် မိုးရေချိန် တိုင်းကိရိယာ (ရင်းဂစ်) အား တီးမတွင်တစ်ခု၊ ကြူကုတ်တွင် တစ်ခု တပ်ဆင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေအား ကြိုတင် သိနိုင်သည့် ကိရိယာဖြစ်၍ နည်းပညာ တိုးတက်လာသည့် အနေအထား ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် တမံဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးသည် အဓိက ကျပါကြောင်း တမံဧရိယာအတွင်း လုံခြုံရေး ထားရှိမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ လုံခြုံရေး ဆိုသည်မှာ ဝန်ထမ်း လုံခြုံရေးဖြစ်ကြောင်း၊ တမံဧရိယာ အတွင်းသို့ ဝင်မည်ဆိုလျှင် ကန့်သတ်မှုများ ရှိကြောင်း မည်သူမည်ဝါ၊ မည်သည့် အကြောင်းအရာကိစ္စ ဆိုသည်ကို မှတ်ပုံတင်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရခြင်းသည် တမံဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆည် ရေလွှမ်းဧရိယာ အစီအမံတွင် မိမိတို့ ဒေသတွင် ရရှိနိုင်သည့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ရေသယံဇာတကို မိမိတို့ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများမှ ပူးပေါင်း၍ မဖော်ထုတ် အသုံးမချနိုင်လျှင် မိမိတို့၏ အားနည်းချက် ရှိသည်ဟု ပြောချင်ကြောင်း၊ အခြားသူတစ်ပါးမှ လာရောက် လုပ်ကိုင်သွားရင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများ စိတ်ထဲ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ၊ ပူပေါင်းသင့်သလား၊ မပူးပေါင်းသင့်ဘူးလား၊ ကျွန်တော် ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုး လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဦးဆောင်နိုင်အောင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ရသည့် အချိန်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၅-နှစ်ခန့် ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် အကြိမ်ကြိမ် အမျိုးမျိုး ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ နားလည်သိရှိပြီး လက်တွေ့ကျကျ ပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်းကာ အများပိုင် ကုမ္ပဏီကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ ဒေသကို တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ချစ်သလို ကျွန်တော်လည်း ချစ်ပါကြောင်း၊ ပျက်စီးအောင် ဆုံးရှုံးအောင် နစ်နာအောင် လုပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ဆည် ရေလွှမ်းဧရိယာ အတွင်း စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက် နစ်နာမှုများ ရှိကြောင်း၊ ယခုလို ဒေသခံ ပြည်သူများ ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိအောင် မည်သို့ စီစဉ် ဆောင်ရွက်မည်ကို အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြခဲ့ပြီး ပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ထိခိုက်မှုအား မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ရည်ရွယ်၍ လုပ်ခြင်းမဟုတ်သည်ကို နားလည်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း တာဝန်ယူမှု (CSR) နှင့် ပတ်သက်သော ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဒီကုမ္ပဏီ စတင် ထူထောင်စဉ် ကတည်းက မူဝါဒ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ပညာရေးကဏ္ဍကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီမှ နှစ်စဉ် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် လိုအပ်မည့် ကျေးရွာများသို့ အရောက် ကျောင်းသုံး စာရေးကိရိယာများ သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း၊ စီမံကိန်းကြီး ပြီးမြောက်သွားပါက နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ငွေခွန် ၂% ပေးသွင်းခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခွန် ၃.၅% ပေးသွင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များ ရှိကြောင်း၊ ထိုအကြောင်းကိစ္စများ ပြီးပါက အကျိုးအမြတ် ဘယ်လောက်ရရှိ၍ ရရှိသည့်အကျိုးအမြတ်အပေါ် ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှကို ပြည်သူ့အကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွင် ဘယ်လောက် သုံးမည်ဆိုသည်ကို လာမည့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ပြတ်ပြတ်သားသား တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ကျေးရွာအားလုံးကို မျှဝေ၍ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်လောက် သုံးစွဲမယ်ဆိုတာကို မတင်ပြနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါ၊ ဘာအတွက်ကြောင့် ဆိုသော် HHPDI ရေအားလျှပ်စစ်ဌာနမှ ဒီဇိုင်းကို အတည် မပြုရသေးခြင်းကောင့် ကုန်ကျစရိတ်မတူလျှင် အရင်းကြေ ကာလမှာလည်း မတူနိုင်ကြောင်း၊ အရင်းကြေကာလ မတူရင် အကျိုးအမြတ် မတူနိုင်သဖြင့် ကွဲပြားမှုများ ရှိနေ၍ မတင်ပြနိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူ့အကျိုးပြု လုပ်ငန်း ဘာတွေလုပ်ဆောင်မလဲဆိုရင် အခြေခံ အဆောက်အအုံ မရှိရင် ဘယ်ဒေသ၊ ဘယ်တိုင်းပြည်မဆို တိုးတက်ရန် အခွင့်အလမ်း နည်းကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံကို ပထမ ဦးစားပေးအဖြစ် ရည်ရွယ်ကြောင်း၊ ဒုတိယအနေဖြင့် ပညာရေး၊ တတိယအနေဖြင့် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍများကို CSR ရဲ့ အချိုးအစားကို ခွဲဝေ၍ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် (MOA) ရေးထိုးပြီး အရင်းကြေကာလပြီးလျှင် နိုင်ငံတော်နှင့် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေ၍ တွက်ချက်မှုများ ဆောင်ရွက်ပြီးပါက ရှယ်ယာ (Share) များ ဖိတ်ခေါ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများ လာရောက်ပူးပေါင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း နိဂုံးချုပ်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
၄။ အထွေထွေကဏ္ဍ (အမေးအဖြေကဏ္ဍ)
မေး ။ ။ စိုင်းသိန်းကျော် (ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်)
(၁) သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်နှင့် ပတ်သက်သည့် စီမံကိန်းတွင် စီမံကိန်းအနီး ရေလွှမ်းမည့် ဒေသဝန်းကျင်တွင် မှီခိုနေကြသော ဒေသခံ ပြည်သူများအား ဆိုးကျိုး အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် အကြံပေးလိုပါသည်။
(၂) လူမှုစီပွားရေးတွင် လက်ရှိ လူမှုစီးပွားနှင့် စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးပါက လူမှုစီးပွား ပြောင်းလဲမှု ရှိမရှိ နှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြပေးစေလိုပါသည်။
(၃) ပြည်သူလူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အသိပေးရာတွင် ဗွီနိုင်း၊ လက်ကမ်းစာစောင်များကို ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား(ရှမ်း၊ ကချင်၊ ပလောင်) စသဖြင့် ရေးသားပေးရန် အကြံပြုပါသည်။
(၄) သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွင် ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်ရန် ထိခိုက်မှု မရှိစေရန် အစီအမံများ ချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ရန် အကြံပေးလိုပါသည်။
ဖြေ ။ ။ ဦးအောင်နန္ဒ (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ MSDES)
(၁) အကြံပေးချက် ဖြစ်သည့်အတွက် အလေးအနက် ထား၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ရေးသားအကြံပြုသွားပါမည်။
မေး ။ ။ဦးစိုင်းစောဝ်အတွင်းရေးမှူး (မြို့နယ်အထောက်အကူပြုကော်မတီ)
(၁)	တမံဆောက်ပြီးလျှင် လယ်ရေပေးနိုင်မည်ဟု သိရပါသည်။ မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည့်နည်း အပြည့်အဝမျှော်လင့်လို့ရ/ မရသိလိုပါသည်။
(၂)	ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံနှင့်နီးသည့်ရွာများတွင် လျှပ်စစ်မီးရနိုင်မည်လား သိရှိလိုပါသည်။
ဖြေ ။ ။ စိုင်းအုန်းမြင့် (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်၊ GHK Public Co.,Ltd.)
(၁)	ပန်ခမ်းကျေးရွာတွင် နွေစပါးစိုက်ဧက (ခန့်မှန်း) ၉၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိကြောင်း ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အမြင့်သည် ၇၆၀ မီတာရှိပြီး လယ်မျက်နှာပြင်သည် ၇၆၉ မီတာရှိသဖြင့် အမြင့်ကွာခြားချက်မှာ ၉ မီတာခန့်သာရှိ၍ လယ်များသို့ရေပေးရန် ဤနည်းမှာခက်ခဲကြောင်း၊ နောက်တစ်နည်းမှာ မော်တာဖြင့်ရေတင်စနစ်လုပ်ပေးလျှင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ နွေရာသီတွင် ချောင်းအောက်ပိုင်းတွင် ရေများမခမ်းခြောက်နိုင်ပါ။ ရေများသည် နဂိုအတိုင်းဆက်စီးဆင်းနေမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေနည်းလာခြင်း၊ များလာခြင်းဆိုသည့် အကျိုးအပြစ်တော့ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေး ။ ။ ဦးအောင်နန္ဒ (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ MSDES)
ဝိန်းနန်းဒေသဘက်သို့ ကွင်းဆင်းကြည့်သည့်အခါ သောက်ရေကိုစစ်၍ သုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ရေများတွင် ထုံးဓါတ်ပါဝင်မှုရှိနေ၍လား။ ထို့ကြောင့်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်မည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် သောက်သုံးရေနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုသည်ကို သိလိုပါသည်။
ဖြေ ။ ။ စိုင်းအုန်းမြင့် (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ GHK Public Co.,Ltd.)
သောက်သုံးရေရရှိရေးအတွက် စိမ့်စမ်းရေမှရေကိုသွယ်တန်းပြီး သောက်သုံးရေရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မေး ။ ။ဦးသိန်းဇော် (ရွှေလီဦး)၊ မူဆယ်မြို့နယ်သတင်းထောက်
(၁)	စီမံကိန်းဒေသပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဓိကရွာများကို စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် ကတိကဝတ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးရှိပါသလား။ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် သိရှိမှုမှာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။
(၂)	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်တိုင်း မြေယာပြဿနာများရှိ၍ မြေယာကိစ္စပြီးပြတ်မှုရှိ/ မရှိသဘော တူညီမှု ရ/ မရ။ အငြင်းပွားမှုများပြီးပြတ်ခဲ့ပါသလား။
(၃)	ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ပြီးလျှင် မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာဘယ်နှစ်ရွာကို လျှပ်စစ်မီးပေးနိုင်မည်နည်း။
(၄)	ငါး၊ သယံဇာတတွေကို ဘယ်လိုလေ့လာထားပြီး ဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေရှိမယ်။ ဘယ်လိုကာကွယ် စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုသည့်အတိုင်းအတာ ပြောပြနိုင်ပါက ရှင်းလင်းပြောပြပေးစေချင်ပါသည်။
ဖြေ ။ ။ ဦးအောင်နန္ဒ (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ MSDES Co.,Ltd.)
(၁)	ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူမှုစီးပွားစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူမှ ကတိကဝတ်ပြုရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ESIA အစီရင်ခံစာတွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူက ကတိကဝတ်ပြုသည့်စာကို ဦးစိုင်းအုန်းမြင့် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရပါမည်။
(၂)	ငါးသယံဇာတနှင့်ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားပြီး လေ့လာသည့်အခါ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ ငါးထိခိုက်နိုင်မှုသည် ရေထဲတွင် ပျော်ဝင်မည့်အောက်စီဂျင်ဓါတ် ပျော်ဝင်မှုအနည်းအများ ပေါ်မူတည်ကြောင်း၊ ရေအရည်အသွေးကို လေ့လာသွားရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းခန့်ခွဲမှု Plan တွင် ဘယ်လိုအနည်းဆုံးထိခိုက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုသည်ကို ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။
(၁)	ကတိကဝတ်ပြုရမည့်အချိန်သည် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ CSR. EMP အစီအစဉ်တွင် လုံးဝကတိကဝတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
(၂)	မြေယာပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍ တမံဧရိယာအတွင်း ထိခိုက်မည့်အပိုင်းနှင့် တမံအောက်ပိုင်းတို့တွင် မြေယာလျော်ကြေးစိစစ်ရေးအဖွဲ့၊ မြေတိုင်းတာစိစစ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် တမံဧရိယာရှိ စိုက်ပျိုးပင်များအား အတည်ပြုစျေးနှုန်းညှိနှိုင်းပြီး မြေယာလျော်ကြေးများလည်းပေးအပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
(၃)	မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာဘယ်နှစ်ရွာသို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်မီးပေးနိုင်မလဲဆိုသည့် မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တမံပတ်ဝန်းကျင်ရှိဆက်စပ်နေသော ကျေးရွာများအား CSR ကိစ္စအနေဖြင့် အိမ်သုံးအတွက်သာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး စက်ရုံများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မူ တောင်းပန်လိုပါကြောင်း၊ မြို့နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဌာနတွင် မူများရှိကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးသာဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းမှထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စစ်ပမာဏသည် မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်း (လုံးဝ) လုံလောက်စွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်သည့် ပမာဏဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။
ဖြေ ။ ။ ဦးသိန်းအောင် (ခရိုင်အင်/ယာ)၊ ခရိုင်လျှပ်စစ်ရုံး။
မူဆယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများသို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလို့ရကြောင်း၊ သို့ရာတွင်မူဝါဒများရှိကြောင်း ဌာနမှသတ်မှတ်ချက်အရ ၂ မိုင်အတွင်း၊ ၁၁ ကေဗွီဓါတ်အားလိုင်းဆောက်လုပ်ပေးမည်ဖြစ်၍ (ထရန်စဖော်မာနှင့်ပွိုင့်ဖိုး) အား ကျေးရွာများမှ ကိုယ်ထူ/ ကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
မူဆယ်မြို့၊ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ် လေ့လာခြင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပထမအကြိမ် အဓိက သက်ဆိုင်သူများ/ ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသော ဒေသခံ ပြည်သူများ အနေဖြင့် စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်၍ ဆွေးနွေး အကြံပြုချက် သဘောထားများ ရေးသားပေးကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးတက်ရောက် လာကြသော ရပ်မိ ရပ်ဖ များနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ